Dynamos Yosangana neHighlanders Apo Iri Kutatarika
VePremier Soccer League svondo rino varonga mitambo miviri pachikwata chega chega kutanga neChina kusvika neMuvhuro apo pachatambwa mutambo mukuru weBattle for Zimbabwe Part 1 pakati peDembare neBosso muRufaro Stadium.
Mutambo uyu uri kuuya apo vatsigiri veDynamos vakabuda muNational Sports Stadium vachizunguza misoro yavo nemusi weSvondo mushure mekunge chikwata chavo chakatatarika zvekare.
Chikwata chine mukurumbira ichi chakatungamira 3-0, ndokudzorwa neShabanie Mine mumutambo uyo wakapera uri mangange 3-3 izvo zvisina kufadza vatsigiri vavo, avo vaitarisira mapoinzi ese matatu.
Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa Dynamos 1-0 neChicken Inn svondo rapera. Mumwe mutsigiri weDynamos VaKhumbulani Mabhorobha vanoti vari kuona kusapihwa mari kwevatambi vavo chiri icho chikonzero chekusatamba zvakanaka kwechikwata chavo.
Vatambi veDynamos vakaita saChristian Epoupa uyo ari kuramwa basa nakaputeni wavo Ocean Mushure havasati vapihwa mari dzavo dzemwaka wapera.
Vamwewo vatambi vanonzi havasati vapihwa mari iyo vakabvumirana kuti vachapihwa nekutambira Dembare mwaka uno.
Asi mumwe mutsigiri weDembare Muzvare Judith Nyatsanza vanoti ino hasisi nguva yekukandirana matombo vachiti ivo pari kudiwa kubatana kwevatsigiri vese veDynamos kuti chikwata chavo chisimuke zvekare.
Mamiriro akaita zvinhu mumusha weDynamos auya panguva iyo Dembare yakatarisana nemutambo mukuru weBattle for Zimbabwe Part 1 uyo vari kusangana neHighlanders neMuvhuro musi wa 2 Kubvumbi.
Asi Highlanders haina matambudziko akadai mushure mekutora mamwe mapoinzi matatu apo yakarova Herentals mushure mekushanya muNational Sports Stadium nezuro.
Highlanders yabatana neNgezi Platinum Stars iyo yakarova Triangle 2-0, pamwe neFC Platinum iyo yakadambura Yadah 2-0 neMugovera sezvikwata zvitatu zvatora mapoinzi ese matanhatu kubva mumitambo miviri yatambwa kusvika parizvino.
Mutare City Rovers 2 Chapungu 3
Black Rhinos 2 ZPC Kariba 0
Harare City 1 Bulawayo City 0
Nichrut 0 Chicken Inn 0
Bulawayo Chiefs 2 Caps United 2
Kwatambwa mitambo miviri, zvikwata zvina zviri pamusoro soro ndeizvi…
FC Platinum 6 points
Ngezi Platinum Stars 6 points
Highlanders 6 points
Shabanie Mine 4 points
Mutare City Rovers 0 points
Triangle 0 points
Herentals 0 points
ZPC Kariba 0 points.